Ukuguqula Ukuthengisa Kwakho ngokusebenzisa Indlela Enamacala Amaningi | Martech Zone
Ukuguqula Ukuthengisa Kwakho ngokusebenzisa Indlela Enamacala Amaningi
NgoLwesihlanu, Okthoba 10, 2014 UDavid Blume
Ngimenywe ukuba ngibambe iqhaza engxoxweni yephaneli yakamuva kwiNgqungquthela Yokukhiqiza Yokukhiqiza Yezokuthengisa e-Atlanta. Iseshini ibigxile ekuTshintshisweni Kwezentengiso, nabaphathi bephaneli behlinzeka ngemicabango kanye nokuqonda kwabo ngemikhuba emihle nezimpumelelo ezibucayi.
Elinye lamaphoyinti okuqala engxoxo lizame ukuchaza igama ngokwalo. Kuyini ukuguqulwa kokuthengisa? Ngabe isetshenziswe ngokweqile futhi kungenzeka ixoshwe? Ukuvumelana okujwayelekile bekungukuthi, ngokungafani nokusebenza kwezentengiso noma ukunikwa amandla, okunezincazelo nezincazelo ezibanzi ezingakholeki, ukuguqulwa kwezentengiselwano kunika ukulungiswa kwempahla yenhlangano yezentengiselwano uma kuqhathaniswa nezinguquko ezincane zokwengeza ukwenza ngcono ukusebenza.
Material kulo mongo kuzothinta izici eziningi zenhlangano, kufaka phakathi:
Isu lokuya emakethe (iziteshi, ukumaketha, imikhiqizo, amanani entengo, izethameli eziqondiwe)
Ingqalasizinda esekelayo (ama-ops wokuthengisa, izinqubo, ubuchwepheshe)
Izinto ezihlobene nabantu ezifana nokuthengisa amakhono nezinhlelo zokuqasha
Ezimweni eziningi, amaphrojekthi wenguquko anwelela emizameni yeminyaka engu-1-2 futhi angaveza inhlangano engcupheni enkulu enqubekweni. Isibonelo, ngenkathi inhlangano yenza ushintsho, kusabanjelwe ukuhlangabezana nezinhloso zekota. Cabanga ngakho njengokuzama ukushintsha amathayi emotweni yakho ngenkathi ushayela. Olunye udaba izinkampani eziningi ezihlangabezana nalo ngamaphrojekthi weminyaka eminingi ukuthi kungenzeka ukuthi osomabhizinisi abangaphansi kwenguquko bashintshe, okungenza imiphumela ingabi ndaba ezifanele!
Yini empeleni ehambisa uguquko ngaphakathi kwenhlangano yokuthengisa?
Iphaneli likhombe kabanzi izici ezimbili eziyinhloko ngemuva kwenguquko: ngaphandle nangaphakathi. Izici zangaphandle zifaka izinto ezifana nezinguquko ekuthengeni, ezobuchwepheshe kanye nabangeneli abasha bokuncintisana. Imikhiqizo emisha, ukuhlangana kanye nokutholwa kanye noshintsho lokuphatha kumele izinto zangaphakathi. Iphaneli livumile ukuthi izinguquko ekuziphatheni komthengi zingenye zezimbangela ezivame kakhulu zenguquko.
Ushintsho ekuziphatheni kokuthenga uphawu lwe:
Ukufinyelela kwabathengi okwandisiwe kolwazi
Ukubandakanyeka okukhulu kwababambiqhaza ezinqumweni zebhizinisi (okuvame ukuvumelana)
Amaqembu wokuthenga asebenza kakhulu
Abathengi bakhulisa okulindelekile kubathengisi maqondana nokusebenzisa ubuchwepheshe babo nesipiliyoni ukusheshisa imiphumela yebhizinisi
Ezinhlanganweni eziningi zokuthengisa, ukwenza ushintsho ekuthengiseni kungumbuzo omkhulu. Ngemuva kwakho konke, sikhuluma ngokushintsha indlela abathengisi abathengisayo abathengisa ngayo, okusho ukuthi bashintshe indlela yokuziphatha egxilile. Lokhu kungaba nzima ukuqala futhi kube nzima kakhulu ukukugcina. Uma ubheka imizamo yangaphambilini yokufaka ushintsho enhlanganweni yokuthengisa (mhlawumbe ngohlelo lokuqeqesha noma ngokwethula ubuchwepheshe obusha, esinye sezizathu ezivame kakhulu ukwehluleka kwabo kungenxa yokwamukelwa kabusha kokuthengiswa kabusha.
Kungani abathengisi bengasebenzisi ubuchwepheshe?
Ngoba bambalwa abaholi bezentengiso abazifaka ezicathulweni zabathengisi bese bephendula umbuzo Kuyini kimi? Uma umthengisi engaboni inani eliqondile ekushintsheni indlela abenza ngayo ibhizinisi, kuyisikhathi nje ngaphambi kokuba babuyele emikhubeni yakudala.
Lokhu kuhambisana nenye inkolelo eqinile evame ukunganakwa: umphathi wezentengiso uyingxenye ebaluleke kakhulu yesisombululo. Imenenja yokuthengisa kumele ikwazi futhi ihlonyiselwe ukuxhumana nokuqinisa izinguquko ezisetshenziswayo. I- kungani okusho ukugqugquzelwa kwebhizinisi ngemuva kwalolo shintsho kuyinto ebalulekile.
Kepha nangu umqubuko. Noma ngabe umphathi uyasiqonda isisusa, uma ukuguquguquka kokuziphatha kunzima kakhulu ukukusebenzisa nokukusebenzisa - kungaba ukugcwalisa izinhlelo ze-akhawunti, ukuvuselela uhlelo lweCRM noma ukulandela inqubo ehlukile - kungaba isiprofetho esizigcwalisayo futhi nawe ' buyela esikweleni esisodwa ngaphambi kokuthi wazi. Lesi ngesinye sezizathu esenza kubikwe ukuthi ama-87% alo lonke ulwazi olunikezwe kuhlelo lokuqeqesha akhohliwe noma alunakwa ngemuva kwezinsuku ezingama-30.
Ukuhlanganisa lokhu ngokuqhubekayo, akukaze kube ngusayizi owodwa olingana sonke isimo. Ukusetshenziswa kwanoma iyiphi inqubo, ukufunda, noma ubuchwepheshe kuyisimo ngokuphelele. Kuyinkimbinkimbi. Ubabandakanya kanjani ababambiqhaza ngamunye ngendlela ezwakalayo? Ingxoxo ithonywe ngu:
Ubani othengisa kuye
Kukumuphi umkhakha wemboni
Ukubheka ukuthi iziphi izidingo zebhizinisi
Ngokuphikisana nalabo esincintisana nabo
Yini umholi wokuthengisa okufanele ayenze?
Ayikho inhlamvu yesiliva. Indlela enemicu eminingi ukubheja kwakho okuhle kakhulu. KUFANELE ufundise, KUFANELE uqeqeshe, KUFANELE usebenzise izinqubo ezintsha futhi uhambise okuqukethwe okusha, KUFANELE unikeze amathuluzi amasha, ulungise izindawo nezinhlelo ze-comp, njll. . Kumele zenziwe ekhonsathini. Ukuqeqeshwa kuqiniswe ngokuqeqeshwa okusebenzayo. Inqubo esekelwa okuqukethwe okuphumelelayo namathuluzi. Futhi konke kuyavumelana nezimo ukuqinisekisa ukuthi ama-reps enza ngokwezifiso indlela asebenza ngayo esimweni ngasinye sokuthengisa esihlukile.
Tags: ukuziphatha kokuthengaizinguquko ezikhulayoUkunika Amandla Ukuthengisaukusebenza kokuthengisaukuthengiswa kabusha kokuthengiswaisu lokuthengisaukuguqulwa kokuthengisa
UDavid uyiPhini likaMongameli we-Strategic Alliances ye I-Qvidian, elibhekele ukuphatha ukuqashwa nokukhula kozakwethu becebo lenkampani. UDavid unolwazi ngokukhethekile emkhakheni wokusebenza ngokuthengisa ezindaweni ezifana nokuphathwa kwesinxephezelo kanye ne-automation yesiphakamiso.
I-vCita: Ukuqokwa, Izinkokhelo, kanye nePortal Yokuxhumana Yezindawo Zamabhizinisi Amancane
Isevisi yokuhumusha nokuhumusha yonke iGraduates
Okthoba 12, 2014 ngo-2: 11 AM
Ekuthengiseni, kubaluleke kakhulu ukuxhumana nomakethe wakho ohlosiwe futhi wenze imininingwane ebalulekile ifinyeleleke kubo noma ngabe kukhona ukulinganiselwa ekuxhumaneni. Ngokuthumela umyalezo wakho kuzethameli zakho, uzothola ithuba elingcono le-ROI.